Umehluko phakathi kwe-sandblasting ne-blasting blasting
Yomibili le nqubo isetshenziselwa ukuhlanza indawo yokusebenza iphinde isuse uthuli.I-Sand Blasting yinqubo elukhuni esetshenziselwa ukuhlanza indawo yokugqwala nemfucumfucu. Imvamisa isetshenziswa ngaphambi kwenqubo yokudweba noma yokumboza. Isebenzisa imidiya ebukhali, noma isihlabathi, ukusika kude phezulu njengokucwebezelayo ...
Ungayisusa kanjani iRust ngeSand Blaster
Ukugqwala kwesandblasting okuvela emotweni kuzokwenza kube lula ukubuyisa nokupenda. Ungasebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zemidiya kwi-sandblast, kuya ngensimbi yemoto nosayizi wendawo. I-Sandblasting iyisidingo ngaphambi kokuthi uqale ukubuyisa Susa imfucumfucu endaweni yokusebenzela enkulu eyi-enoug enkulu ...
Indima yesihlabathi ukuqhumisa umshini futhi shot ukuqhumisa umshini
Imishini yokuqhuma isihlabathi idlala indima ebalulekile kule nqubo, kunjalo, ziningi ezinye izimboni, imikhiqizo eminingi isetshenzisiwe emshinini wokuqhumisa isihlabathi ukusingatha. Umshini wokuqhuma isihlabathi ukusetshenziswa komoya onomfutho, isihlabathi, ukushaywa ngesivinini esikhulu ngombhobho wesibhamu lapho umkhiqizo we-corrosion ...
Shot Machine ukuqhumisa - Izicelo
Kukhona izicelo eziningi imishini shot ukuqhumisa. Isicelo sokuqala nesiphambili ukuhlanza ama-castings ukususa isihlabathi esivulekile futhi esishisiwe nesikali kusuka ekusakazeni okuyisiyingi nokungeyona eyensimbi. Inqubo yokuqhuma ye-Shot inciphisa i-porosity futhi inyuse ingcindezi ngamandla wokuma we-aluminium ...
ingxenye ehlukile yomshini we-sandblasting
Izingxenye ezintathu ezihlukene ngomshini we-sandblasting setup we-Sandblasting imvamisa uqukethe izingxenye ezintathu ezihlukene: i-abrasive uqobo, i-compressor yomoya, kanye nombhobho we-blaster. Okokuhlanza okucocekileyo nokuncane, indawo yokusebenza yokubamba ucezu lwengilazi iyadingeka, njengolunye uhlobo lokuqoqa ...
uyini umshini we-Shot blaster
Umshini we-Shot blaster ungenye yezinsimbi ezibaluleke kakhulu ze-sandblasting. Vele awukho kuphela umshini wokudubula we-blaster, ngoba kunezindlela eziningi ezahlukahlukene ze-sandblasting. Umshini we-Shot blaster ungaba namasondo amane, ayisithupha, ayisishiyagalombili noma ngaphezulu, futhi ungaba nendlela ye-turntable ye ...
Intengo yomshini wokuqhumisa
Intengo yomshini wokuqhumisa we-HST yiyona eshibhe kakhulu kubakhiqizi bemboni efanayo. Intengo yomshini we-Sandblasting, ngiyazi kancane ngentengo eku-inthanethi yomshini wokuqhumisa isihlabathi, nakukhasimende ngocingo ebonisana nabanye abakhiqizi bomshini wokuqhumisa umshini wentengo ...